I-iPhone 13 ine-RAM efanayo nesizukulwane esedlule | Izindaba ze-IPhone
U-Angel Gonzalez | 16/09/2021 16:00 | iPhone 13
I-Apple ayikaze inikeze imininingwane ngememori ye-RAM yamadivayisi ayo. Lokhu kungenxa yokuthi uhlelo lokusebenza ukuthi ithwala ayidingi imemori engaka ukuze isebenze kahle futhi ebavumela ukuthi bafake izinkumbulo eziphansi ku-iPhone yabo. Kepha uma kukhulunywa ngokuthengisa umkhiqizo, kubi ukuba nezinkumbulo ezingaphansi komncintiswano, okwenza i-Apple igweme ukubika le datha kumazwi ayo aphambili. Kodwa-ke, i-beta yeXcode 13 iveze i-RAM ye-iPhone entsha 13. Ngenkathi inani lePro lifinyelela ku-6 GB, i-iPhone 13 no-13 mini ukuhlala ku-4 GB. Le mininingwane yile kufana nezinkumbulo ze-iPhone 12 yethulwe ngoSepthemba wangonyaka odlule.
I-6 GB ye-RAM ye-iPhone 13 Pro ne-4 GB ye-RAM ye-iPhone 13 ne-13 mini
Ukhiye wokuthola lolu lwazi uku- ikhodi efihliwe ku-Xcode 13 beta. Njengakwezinye izikhathi, la ma-betas asivumela ukuthi sithole imininingwane efanelekile kumadivayisi angakabi sezandleni zethu. Kwenzekile ngonyaka odlule nge-iPhone 12 nangeminyaka emibili eyedlule nge-iPhone 11 esikwaze ngayo ukukhipha imininingwane kwi-hardware yangaphakathi ngokusebenzisa i-Xcode betas i-Apple enikela ngayo kubathuthukisi uma isiphetho sangoSepthemba sesiphelile.
Abathuthukisi bakhiphe lolo lwazi futhi bekulokhu kungenzeka ukuthi bazi i-RAM ye-iPhone 13 entsha. Le memori ivumela i-iPhone ukuthi igcine idatha okwesikhashana ngokususa lonke ulwazi lapho idivayisi iqalwa kabusha noma icishiwe. Inani le-RAM lihlobene nokusebenza kwedivayisi, kepha ukuguquguquka kwesistimu yokusebenza okumele ikwazi ukwenza kahle izinsiza nakho kuyangenelela. Uhlelo lokusebenza olwandisa izinsiza kahle aludingi inani elikhulu le-RAM ukuze lisebenze kahle, njengoba kunjalo nge-iOS ne-iPadOS.
Endabeni ye-iPhone 13 kutholakele lokho yabelana nge-RAM efanayo ne-iPhone 12. I-iPhone 13 ne-13 mini iphethe inkumbulo engu-4 GB, kanti amamodeli wePro nePro Max afaka inkumbulo engu-5 GB, njengabalingani babo besizukulwane esedlule. Lolu lwazi lungaqinisekiswa lapho kutholwa amayunithi okuqala emasontweni ambalwa. Noma kunjalo, umthombo uyafana nakuzo zonke izizukulwane ezedlule nakuzo zonke lolu lwazi luvumelana neqiniso.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » iPhone 13 » I-iPhone 13 inememori efanayo ye-RAM njengesizukulwane esedlule